About – Kobciye
Kuwo ka mida Warisdaha Kobciye.
Ereyga Tifaftiraha Warsidaha
In Wargeysku u diga-rogto qaab Online ah waxa ay noo tahay sharaf. Waxa aan muddo ku taameyney sidii aan warsidaha uga dhigi lahayn mid si fudud dad badan oo daneeyayaal ahi u akhrisan karaan. Aqoonta iyo macluumaadka ku dhisan horumarinta afka iyo dhaqanka ee mar walba uu horseedka u yahay KOBCIYE waxa ay ka dhigan tahay mid sooyaalku xusi doono. Sidaa darteed waxa aan akhristayaashii ku xidhnaa iney sugaan nuqullada la daabaco ee warsidaha aan halkan ugu bushaareyneynaa in ay ka daalacan karaa degelkan oo ka dhex akhrisan karaan dhammaan wargeysyadii hore u soo baxay, kuna xidhnaan doonaan si ay u helaan kuwa soo bixi doona.
Waxa bahda warsidaha afka iyo dhaqanka ee KOBCIYE balanqaadayaan in si joogto ah degelkan loo soo gelin doono mar kasta oo uu soo baxo. Waxa kale oo aad degelka ka akhrisan kartaa qormooyin kale oo la xidhiidha horumarinta afka iyo ereyga dhigan. Ugu dambeyntii akhriste haddii aad la dhacdo, ama jeceshahay in qormo aad ku soo daabacdo warsidaha waxa aan si kal-furan kuugu soo dhaweyneynaa inaanu daabici doono qormadada haddii ay waafaqdo tayada iyo anshaxa qoraallada aan daabacno.
Tifaftiraha guud ee KOBCIYE
Guddida Sare ee Warsidaha
Waa guddoomiyaha guud ee bahda Warsidaha afka iyo dhaqanka ee KOBCIYE. Waa qoraha buugga caanka ah ee “Waa maxay Autism iyo xaaladaha la xidhiidha”, waxa uu aqoon iyo waayo-aragnimo dheer u leeyahay caawinta waalidka iyo carruurta la nool xanuunka Autism-ka.
Siciid M Xuseen
Waa tifaftiraha guud ee warsidaha afka iyo dhaqanka ee KOBCIYE. Waxa uu hore u qorey tiraba laba buug, waxa kale oo tifaftiray buugaag badan. Waa akhriste caan ku ah gorfeynta iyo abla-ableynta buugaagta. Waxa uu hadda gacanta ku hayaa buug cusub.
Khaalid J Qodax
Waa guddoomiye ku xigeenka guud ee bahda Warsidaha afka iyo dhaqanka ee KOBCIYE. Waa guddoomiyaha guud ee ururka dhallinyarada ee Bristol Horn Youth Concern. Waa khabiir ku xeel-dheer tobbarka dhallinyarada iyo la dagaalka caadooyinka xun xun ee dhallintu ay sameeyaan.
Khalil A Cabdi
Gudoomiye Ku Xigeen